Oge asaa echefughi echefu n'ime ime ụlọ ịwụ egwuregwu vidiyo | Akụkọ akụrụngwa
El ime ụlọ ịwụ Ọ bụ ime ụlọ chọrọ nkasi obi na mmekọrịta chiri anya site na ịsa ahụ izu ike na mkpa ụmụ mmadụ ndị ọzọ. Ime ụlọ dị na ya, nke kacha mkpa, apụtaghị ibi amaokwu pụrụ iche, mana hey, lee, anyị na-ewetara gị nchịkọta nke oge ụfọdụ echefughi nke ụlọ ịsa ahụ, ma nke ụlọ ma nke ọha, nke bụ n'ezie ọtụtụ ndị Fans egwuregwu vidio ị ga-echeta.
Site na amaokwu eschatological, site na oke iti ihe, mbido puru iche, ụjọ ọnwụ na akụkọ ifo site na mmemme akụkọ, ndị a bụ ụfọdụ ọnọdụ anyị họọrọ: mmadụ ole ka ị ga-amata?
Duke Nukem 3D ọ bụ ezigbo akụkọ ifo. Fps ahụ magburu onwe ya jikọtara onye na-akwadoghị ihe ọjọọ, nnukwu ihe eji emepụta, ọtụtụ ntachi na ọchị pụrụ iche. Na nke mbụ akụkọ ifo nke egwuregwu ahụ, nke sinima porn, anyị nwere ike ịbanye n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ na ala ala ma juo otu n'ime ndị ọbịa si mba ọzọ na-awakpo anya dị ka afọ. Kama ịkpọ oku ma jiri nkwanye ugwu jụọ ya ma ọ nọ ọrụ, Duke mere ihe kachasị mma ọ mara etu: izipu mbu, jụọ.
Metal Gear siri ike
Anyị na-aga n'ihu na nnukwu kpochapụwo ọzọ, na nke a, ọ bụ ihe a na-apụghị ịkọwa ọzọ Metal Gear siri ike, nke pụtara na nke mbụ PlayStation. Na mgbakwunye na inwe ike iju ụfọdụ ndị agha na-enweghị ntụpọ na-egbochi eriri afọ ahụ, n'ime ime ụlọ ịwụ nke ụlọ agha nuklia, enwere ọnọdụ Meryl, ada colon Campbell, bụ onye tụrụ anyị aka azụ n'azụ ya nke ugboro abụọ na ebe o kwuru banyere mmetụta ya banyere ihe egwu nke agha.
GoldenEye 007 na Nintendo 64 ọ bụ otu n'ime egwuregwu ndị a kacha hụ n'anya na sistemụ ahụ: eserese na-akwụsị obi, ihe nkiri na-enweghị atụ, njikwa impeccable na mmetụta zuru oke Aka okpueze ya dị ka usoro kachasị mma emere maka ụwa nke 007. O doro anya na ọtụtụ n'ime gị na-echeta mmalite nke ọkwa ahụ Ụlọ ọrụ, ebe James Ọ banyere n'ụlọ ndị iro site na ikuku ventilashion nke na-eduga na cubicle ime ụlọ ịwụ, site na ebe anyị nwere ike ịdakwasị isi nke ndị na-enweghị nchebe na ụlọ mposi dị n'akụkụ.
Ogwe mbụ nke ọchịchịrị Silent Hill 2 ha mere na ụlọ ịsa ahụ okporo ụzọ rụrụ arụ, ebe onye na-egwu egwuregwu ahụ mere ka ihu ya dị ọhụrụ tupu ọ kọọ ihe kpatara njem ya gaa obodo a bụrụ ọnụ. Ma mmalite ahụ abụghị nanị oge nke ọ bụ James ya na ime ụlọ ịwụ na-emekọrịta ihe: n'ime ụlọ obibi ahụ, mpaghara mbụ nke egwuregwu ahụ, ọ ga-abanye n'ime mposi na akụkụ ahụ ọgbụgba ahụ nke mere na n'ezie ọtụtụ n'ime gị tụfuru ebe ahụ.
Tupu iju anyi anya Mmiri ozuzo o Na-agafe: Mkpụrụ obi abụọ, Nrọ Nrọ tụbara Fahrenheit na PlayStation 2, Xbox y PC, dị ka ihe egwuregwu nke egwuregwu abụọ mbụ ahụ. Fahrenheit Ọ malitere n'ụzọ siri ike n'ime ime ụlọ ịwụ nke ụlọ oriri na ọeterụ cafụ, ebe onye bụ isi ga-egbu onye aka ya dị ọcha na ọbara oyi. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, egwuregwu ahụ kpọrọ anyị ka anyị chọpụta eziokwu nke ihe a niile, mana tupu anyị ehichapụ ihe foduru nke ebe mpụ ahụ na ọsọ ọsọ, tupu mmadụ abanye ebe ahụ.
Splinter Cell: Nkwenye
The penultimate njem nke Sam onye azu Ọ bụ mmemme na-adịghị njọ na nke ime ihe ike karịa utu aha ndị gara aga na aha, lekwasịrị anya na stealth. Na Ikpebi Cell Splinter, usoro nke ajuju nke anu aru mere, ebe ya na nkpagbu na ihe otiti di egwu, Fisher nwere ike ime ka onye obula abu. Nke mbụ n'ime nzukọ ndị ahụ mere n'otu ụlọ ịsa ahụ ọha na eze ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nweghị ihe fọdụrụ n'ọnọdụ ya.
The haunting ngosi nke pt Ọ bụ ezigbo mmalite nke ihe gaara eche anyị na nke ahụ Silent Hill na ọ na-aga ịchịkọta talent nke Hideo Kojima y Guillermo del Toro. O di nwute, anyi amaworị nke ahụ Konami mere mkpebi ịkagbu ọrụ ahụ, ọ bụ ezie na a na-atụ anya na n'ọdịnihu, anyị ga-anụ akụkọ banyere saga a. Na-elekwasị anya pt, otu n'ime akụkụ ndị kasị dị egwu na demo na-awụ akpata oyi n'ahụ bụ nke dugara anyị ka anyị nyochaa ime ụlọ ịwụ nke ụlọ ihe omimi ahụ, ebe anyị hụrụ nwa ebu n'afọ dị ndụ na nsị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Oge asaa echefughi echefu n’ime ime ụlọ ịwụ egwuregwu vidio
TOP 5 egwuregwu vidio kachasị ere nke 2015